nkume magnetik: àgwà, ụdị na mkpa | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 29/11/2021 17:28 | Geology
na nkume magnetik na magnetism nke nkume na-ejikọta na magnetism nke mineral, nke dị oke mkpa maka nghọta nke usoro nchọpụta geophysical magnetik. Ọtụtụ mineral na-akpụ nkume na-egosipụta ike ndọta dị ala, na ihe kpatara okwute ji bụrụ magnetik bụ na oke nke mineral magnetik ha nwere na-adịkarị obere. Naanị otu geochemical abụọ na-enye nkume ndị a mineral na magnetism.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nkume magnetik, àgwà ha nke magnetism nke mineral.
1 Gịnị bụ magnetik nkume
2 Ụdị nkume magnetik
3 Igwe ndọta na mkpa
4 Ogwe ndọta
Gịnị bụ magnetik nkume
Otu iron-titanium-oxygen nwere ngwọta siri ike nke ọtụtụ mineral magnetik sitere na magnetite (Fe3O4) ruo ulvöspinel (Fe2TiO4). Ụdị hematite iron oxide ọzọ a na-ahụkarị (Fe2O3) bụ antiferromagnetic n'ihi ya, ọ naghị ebute nsogbu ndọta. Isi sọlfọ iron na-enye pyrrhotite ịnweta magnetik (FeS1 + x, 0 nke nwere okpomọkụ Curie nke 578 Celsius.
Ọ bụ ezie na nha, ọdịdị na nkesa nke ihe ndọta magnetite dị na nkume ga-emetụta njirimara magnetik ya, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịkọwa àgwà magnetik nke nkume ahụ dabere na ọdịnaya magnetite ya n'ozuzu ya.
Ụdị nkume magnetik
N'ihi ọdịnaya magnetite ha dị oke elu, okwute ndị na-agba ọkụ na-abụkarị okwute magnetik. Ọnụ ọgụgụ nke magnetite na nkume ndị na-egbuke egbuke na-ebelata site na ụba acidity, ya mere ọ bụ ezie na nkume ndị na-egbuke egbuke acid nwere ihe ndọta dị iche iche, ihe ndọta ha na-adịkarị ala karịa nke nkume ndị bụ isi.
Njirimara ndọta nke nkume metamorphic na-agbanwekwa. Ọ bụrụ na nrụgide akụkụ nke ikuku oxygen dị ala, a ga-emegharị magnetite na ígwè na oxygen ga-ejikọta na usoro ịnweta mineral ndị ọzọ ka ogo metamorphism na-abawanye. Otú ọ dị, nrụgide dịtụ elu nke ikuku oxygen nwere ike ime ka e guzobe magnetite, nke na-arụ ọrụ dị ka ịnweta enyemaka na mmeghachi omume metamorphic.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọdịnaya magnetite na ike ndọta nke nkume dịgasị iche iche, na enwere ike inwe nnukwu ndakọrịta n'etiti lithologies dị iche iche. Mgbe ole A na-ahụ ihe ndị na-adịghị mma magnetik na mpaghara sedimenti kpuchiri, A na-ebutekarị anomalies site na nkume ndị na-asọ oyi ma ọ bụ okpuru ulo metamorphic ma ọ bụ sedimenti intrusive.
Ihe na-ebutekarị ihe ndọta anya gụnyere levees, mmejọ, mpịaji ma ọ bụ mkpọtu na mmiri na-asọpụta, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke intrusions bụ isi, nkume okpuru ulo metamorphic, na ahụ magnetite. Ogo nke magnetik anomaly sitere na iri puku kwuru iri nT n'ime okpuru ulo metamorphic miri emi ruo ọtụtụ narị nT n'ime ahụ intrusive bụ isi, na ịdị ukwuu nke mineral magnetite nwere ike iru ọtụtụ puku nT.
Igwe ndọta na mkpa
Mgbe afọ atọ nke nchịkọta data gasịrị, ka ebipụtala ya maapụ oghere oghere kachasị elu nke ala ndọta lithospheric nke ụwa. Ihe ndekọ data ahụ na-eji usoro nlegharị anya ọhụrụ iji jikọta nsonaazụ nha sitere na satịlaịtị Swarm ESA yana data akụkọ ihe mere eme sitere na satịlaịtị CHAMP German, nke na-enye ndị sayensị ohere iwepụta obere akara ndọta na elu elu ụwa. Uhie na-anọchi anya mpaghara ebe oghere magnetik lithospheric dị mma na-acha anụnụ anụnụ na-anọchi anya ebe ebe magnetik lithospheric dị njọ.
Onye isi mgbasa ozi Swarm nke ESA Rune Floberghagen kwuru na nkwupụta: “Ọ dịghị mfe ịghọta ihe jikọrọ kpakpando nne na nna anyị. Anyị enweghị ike iji ya tụọ nhazi ya, nhazi ya na akụkọ ihe mere eme ya.. Ntụle sitere na mbara igwe bara ezigbo uru ebe ọ bụ na ha bụ nkọwa nke nhazi magnetik nke shei siri ike nke ụwa anyị.
Na Nzukọ Sayensị Swarm na Canada n'izu a, maapụ ọhụrụ ahụ gosipụtara mgbanwe zuru oke n'ọhịa nwere oke nkenke karịa nrụgharị satịlaịtị gara aga, nke sitere na nhazi ala dị na mbara ụwa.
Otu n'ime ihe na-adịghị mma mere na Central African Republic, gbadoro ụkwụ na Bangui, ebe magnetik na-akawanye nkọ ma sie ike karị. Ihe kpatara nke a anomaly amabeghị, ma ụfọdụ ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na o nwere ike bụrụ nsonaazụ nke meteorite ihe karịrị nde afọ 540 gara aga.
Ebe ndọta nọ n'ọnọdụ mgbanwe na-adịgide adịgide. Magnetik n'ebe ugwu mgbanwe na polarity na-agbanwe kwa narị puku afọ ole na ole, ya mere kompas na-atụ aka na ndịda kama n'ebe ugwu.
Mgbe ọrụ mgbawa ugwu na-emepụta eriri ọhụrụ, ọkachasị n'akụkụ oke osimiri, mineral bara ụba nke igwe na magma siri ike ga-eche ihu magnetik n'ebe ugwu, si otú a na-ewepụta “ihe onyonyo” nke oghere ndọta a chọtara mgbe nkume ahụ jụrụ oyi.
Ka ogwe ndọta na-aga azụ na-aga ka oge na-aga. mineral siri ike na-etolite 'fringe' n'elu oke osimiri ma nye ndekọ nke akụkọ ihe mere eme magnetik nke ụwa. Maapụ Swarm kachasị ọhụrụ na-enye anyị nkọwapụta na-enwetụbeghị ụdị ya nke rịbọn jikọtara ya na tectonic plate, na-atụgharị na ugwu dị n'etiti oke osimiri.
“Mgbagwoju ndọta ndị a bụ ihe akaebe na-egosi ngbanwe oghere ndọta, na nyocha nke akara ukwu ndọta dị n'akụkụ oke osimiri nwere ike wulite mgbanwe ndị gara aga na mpaghara magnetik nke isi. Ha na-enyekwa aka n'ịmụ plate tectonics, "Dhananjay Ravat nke Mahadum Kentucky kwuru.
Map ọhụrụ ahụ na-akọwa njirimara nke oghere magnetik ruo ihe dị ka kilomita 250 n'ogologo na ọ ga-enyere aka nyochaa ọdịdị ala na ọnọdụ okpomọkụ nke lithosphere ụwa.
Nkume magmatic dịkwa mkpa site n'echiche nke nkume magnetik. Ọ bụkwa na ọ dị mkpa iburu n'uche na n'ime ime ụwa enwere nnukwu ígwè.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere nkume magnetik, mkpa ha na ogwe osisi magnetik nke ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Nkume magnetik